YEYINTNGE(CANADA): Saturday, May 01
Wfslb Mayday Statement
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/01/20100အကြံပြုခြင်း
1 May 2010 ဒိုင်ယာရီ
1 May 2010 Yeyintnge Diary
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ၏ တံဆိပ်သည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
- အစိမ်းခံစတုခံ (အလျား ၂လက်မ၊ အနံ ၃လက်မ) တွင် အနီခံဒိုင်းပါရှိပြီး ဒိုင်း၏ ဘေးပတ်လည်၌ ရွှေဝါရောင် သပြေရွက်များ ပါရှိသည်။
- ဒိုင်းအတွင်း၌ ခြင်္သေ့ထိုင်နေပုံကို မြန်မာ့ရိုးရာကောက်ကြောင်းဖြင့် ရေးထိုးထားပါသည်။
- ဒိုင်းပုံ၏ ထိပ်တည့်တည့်တွင် အဖြူရောင် ကြယ်တစ်လုံးပါရှိသည်။
- ဒိုင်းပုံ၏အောက်ဘက် အနီရောင်ထဲတွင် အသင်း၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သော (စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်း၊ ကြံ့ခိုင်၊ စည်းလုံး) ကို အဖြူရောင်ဖြင့် ရေးသားထားပါသည်။
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ၏ အလံ
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ၏ အလံသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
- အလံ၏ အရွယ်အစားမှာ အလျား ၁၀ပေ အနံ ၆ပေရှိသော အစိမ်းရောင်တွင် လက်ဝဲဘက် အပေါ်ထောင့်၌ အနီရောင် အခန်းရှိသည်။ ထိုအခန်း၏ အရွယ်မှာ အလျား ၄ပေ၊ အနံ ၃ပေဖြစ်သည်။
- ထိုအနီရောင်အခန်း၏ အလယ်တည့်တည့်တွင် အမြင့် ၁ပေ၊ ၈လက်မရှိသော ငါးထောင့်ကြယ်ဖြူတစ်လုံးရှိသည်။
အစိမ်းရောင်၏ သဘောမှာ အေးချမ်းသာယာခြင်းဖြစ်သည်။
- အနီရောင်၏ သဘောမှာ ရဲစွမ်းသတ္တိ ရှိခြင်းဖြစ်သည်။
- ကြယ်ဖြူတစ်လုံး၏ သဘောမှာ တစ်လုံးတစ်စည်းတည်းရှိသော ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ဖြစ်ခြင်း၊ ကြယ်တို့၏ ဂုဏ်ထူးဝိသေသဖြစ်သော ကိုယ်ပိုင်အလင်းရှိခြင်း၊ မိမိခရီးလမ်းကို ဖြောင့်တန်းစွာ သွားလေ့ရှိခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ၏ဆောင်ပုဒ်
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ၏ ဆောင်ပုဒ်သည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်း၊ ကြံ့ခိုင်၊ စည်းလုံး
[ ဟံသာဝတီ သတင်းဌာန အနေဖြင့် ဤ သတင်း ကို ထောက်ခံခြင်း ၊ မထောက်ခံခြင်း ကို ကိုယ်စားမပြုဘဲ အပေါင်းလက္ခ္ခဏာ ဖြစ်စေ၊ အနုတ် လက္ခဏာ ဖြစ်စေ ထူးခြားသော အသွင် တစ်ခု ဆောင်နေပါက စာဖတ် ပရိတ် သတ်များ သတိ ပြုမိ စေလို ၍ ဖော်ပြ ပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ]
၁ . ၅ . ၂၀၁၀
2010 May 1st NCUB Statement Supporting NLD's Legal Actions
2010 May 1 NCUB Statement Supporting NLD's Legal Actions
ဒေါင်းယောင်ဆောင်သော ကျီးများမှ ပါတီအမည်၊ အလံနှင့်တံဆိပ်ကို ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်တဲ့.....
ယနေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာမှာ အေးလွင်တည်ထောင်တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ပြုတ်ကျောင်းသားလူငယ်များ (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)က ပါတီအလံပုံစံနဲ့ တံဆိပ်တွေကို ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကြေငြာထားပါတယ်။ ပါတီအလံမှ ခွပ်ဒေါင်းပုံကို အကြီးအကျယ် ကန့်ကွက်ပါတယ်။ ခွပ်ဒေါင်းနဲ့ လားလားမျှ မထိုက်တန်တဲ သာကူး ကျီးမဲတွေ ဒေါင်းယောင်ဆောင်ထားလို့ပါ။ ခွပ်ဒေါင်းတွေ ကန့်ကွက်ကြပါ။
အောက်ပါပါတီအလံနဲ့ တံဆိပ်ပုံများကို အသုံးပျြုနိုင်ပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက်ပြုတ်ကျောင်းသားလူငယ်များ (ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ) ပါတီအလံပုံစံ
၈၈ မျိုးဆက်ပြုတ်ကျောင်းသားလူငယ်များ (ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ) ပါတီတံဆိပ်
2010 May 1st NCUB Statement Supporting NLD's Legal...